“Haddii uu Sergio Ramos ahaan lahaa Argentinian, Lionel Messi waxa uu ku guuleysan lahaa Koobka Adduunka” – Gool FM
“Haddii uu Sergio Ramos ahaan lahaa Argentinian, Lionel Messi waxa uu ku guuleysan lahaa Koobka Adduunka”
Haaruun May 1, 2021
(Madrid) 01 Maajo 2021. Mid ka mid ah niyad-jabkii ugu weynaa ee Lionel Messi ayaa seegay Koobkii Adduunka ee 2014, laakiin Oscar Ruggeri ayaa rumeysan in Kabtanka Barcelona uu ku guuleysan lahaa koobkaas, haddii Sergio Ramos uu ahaan lahaa Argentinian.
Daafacii hore ee Boca Juniors oo xulkiisa Argentina u saftay 97 kulan, waxa uu rumeysan yahay in xulka uu ka maqnaa laacib leh awoodda Ramos.
“Argentina iyo Messi oo lagu daray Ramos waxa ay la micno tahay Koobka Adduunka,” Ruggeri ayaa sidaas u sheegay Shabakadda ciyaaraha ee ESPN, waxaana uu hadalkiisa intaas ku daray: “isaga [Ramos] waa bahal.”
“Haddii Argentina ay difaac ahaan u haysan lahayd Ramos, waxay noqon lahaayeen kuwa heysta Koobka adduunka, Messi iyo sida uu ahaa, shaki la’aan isagu waa ififaallo.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ciyaaryahan sida Ramos oo kale ku haysanno xulkeyga qaranka, haddii aan maanta haysan lahayn ciyaaryahan sida Ramos oo kale ah, waxaan noqon laheyn kuwa u tartama Koobka Adduunka ee kasta.
“Waxaan haysannay daafacyo dhexe oo wanaagsan, laakiin ma’aheyn kuwa ugu fiican waqtiga oo dhan, Ramos ayaa ugu fiican, waa ay fiicnaan lahayd haddii uu ahaan lahaa Argentine, isaga ayaa iga fiican, lambarka koowaad, waxa uu ka sarreeyaa qof kasta.”
Barcelona oo carqaladeysay wada xaajoodka heshiis kordhinta ah ee u socday Neymar Jr iyo naadiga PSG... (Sidee?)
Shaxda rasmiga ah ee ciyaarta Crystal Palace vs Man City oo lasoo saaray & Agüero oo safka koowaad kusoo laabtay